हिन्दुत्व विचारधारा र काश्मीरमा मोदी राज
Sunday, December 08, 2019 | आईतबार, मंसिर २२, २०७६
हरि राेका काठमाडौं,२२ साउन
भारतका विख्यात पत्रकार एवं लेखक कुलदीप नायरले ‘अफ लिडर्स एन्ड आइकन, फ्रोम जिन्हा टु मोदी’ किताब लेखेका छन् । यो किताब आठ महिनाअघि (२०१९ जनवरी) बजारमा आएको हो । उनले यो पुस्तकमा ब्रिटिस–भारतकालीनदेखि आधुनिक कालसम्मका नेताहरूको वर्णन गरेका छन् ।
नायरले शेख अब्दुल्लाह (शेख अब्दुल्लाह स्वतन्त्र भारतमा काश्मीर गाभिएपछिका दोस्रा प्रधानमन्त्री थिए)बारे एउटा प्रसंग कोट्याएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘म शेख साहिवबारे उनका छोरा (फारुक अब्दुल्लाह) भन्दा त त्यति धेरै त जान्दिनँ । तर, व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टीसँग भन्दा राज्यसँग धेरै हात–हतियार हुन्छन् भन्ने कुरा शेख सहावलाई राम्रो जानकारी थियो र उहाँ राज्यविरुद्ध हिंसाको राजनीति चाहनुहुन्थेन ।
मलाई लाग्छ, कहिलेकाहीँ फारुक अब्दुल्लाह (शेखका छोरा)ले काश्मीरबारे नबुझेका पो हुन् कि ? शेख साहबले भारतमा काश्मीरलाई मिलाउने दबाब आएपछि महाराजा हरि सिंह (डा. करण सिंहका पिताजी)लाई समर्थन गरेका थिए । खासमा सुफिजम र बहुलवादको अवधारणासँग लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका कारण । पकिस्तानलाई यिनै कारणले उनले अस्वीकार गरेका थिए किनकि पाकिस्तान धार्मिक आस्थामा आधारित (थियोक्रेटिक राज्य) राज्यका रूपमा स्थपित हुुन पुगेको थियो ।’
नायरको यो लेखाइले तीन वटा विषय पुष्टि हुन्छ । पहिलो, काश्मीर बेलायतले शासन सत्ता चलाएको हिन्दुस्थानभित्रको प्रिन्सली–भेसल–स्टेट थिएन । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट इन्डिया (हिन्दुस्थान) मुक्त हुनुपूर्व स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । त्यो राष्ट्रका अन्तिम राजा हरि सिंह थिए ।
स्वतन्त्रतासँगै हिन्दुस्थान (इन्डिया) भारत र पाकिस्तानमा विभाजित भयो । यो विभाजनसँगै दुई देशबीच छेडिएको युद्धमा यो पहाडी स्वतन्त्र राष्ट्र काश्मीरमाथि भारत वा पाकिस्तानमा मिल्ने दबाब आउन थाल्यो । काश्मीर हिन्दु राजाले राज गरेको तर मुस्लिम बाहुल्य भएको मुलुक थियो । बहुल धर्म र संस्कृति भएको मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता भड्किएपछि मुलुक एकीकृत बनाउन गाह्रो हुन्छ । शेख अब्दुल्लाहलगायतका प्रभावशाली व्यक्ति धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती र लोकतन्त्रप्रति आस्थावान् रहेकाले मुसलमान भईकन पनि भारत रोजे । जसलाई शेख समग्रतामा काश्मीरीयात भन्न रचाउँथे । त्यही पनि सिंगो काश्मीरलाई एकै ठाउँमा जोगाएर समावेश गर्न सकेनन् । भारतमा गाभिएको काश्मीर जसलाई ‘इन्डिया अकुपाइड काश्मीर’ भनिन्छ । र, केही भाग जो पाकिस्तानले ओगट्यो, जसलाई पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर भनिन्छ ।
दोस्रो, राजा हरि सिंह र काश्मीर राज्यका अन्य पदाधिकारी जो धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्रका पक्षमा थिए, उनीहरूले स्वतन्त्र भारतको केन्द्रलाई परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुद्रा परिचालनबाहेक अन्य सबै राजकीय अधिकार एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रकै हैसियत रहने कुरामा सम्झौता गरेका थिए । त्यसैले शेख साहबलगायतका साहब काश्मीरका प्रधानमन्त्री बनाइए । शेख साहब त्यस कुरामा दृढ थिए । तर, सुरुदेखि नै काश्मीरलाई अलग राष्ट्रको मान्यता नदिने पक्षमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभित्रकै केही अति दक्षिणपन्थी व्यक्ति तथा शक्तिहरू र काश्मीरकै पनि अल्पसंख्यक हिन्दुहरू पनि कपटपूर्ण जालझेलमा लागिपरेका थिए ।
जवाहरलाल नेहरुको मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्य श्यामप्रसाद मुखर्जी (जो पछि भारतीय जनसंघका संस्थापक सदस्य बन्न पुगे) काश्मीरलाई अलग्याउन पूर्ण रुपमा अभियानमै थिए । पछि त्यही अभियानमा जम्मु पुगेपछि जेल परेका थिए र त्यहीँ कालगतिले मरे पनि । तर, संघीहरूले मुखर्जीलाई शहीद घोषणा गरे ।
सन् १९५३ मा सोही षड्यन्त्रका कारण ८ अगस्त १९५३ मा सद्र ए रियासत (संवैधानिक राजा रहेका) डा. करण सिंह (महाराज हरि सिंहका छोरा)ले शेख साहबले नेतृत्व गरेको निर्वाचित मन्त्रिमण्डल भंग गरे । अझ भनौं, उनले एकपटक पनि संसदमा बहुमत रहेको–नरहेको पुष्टि गर्नसमेत अवसर दिएनन् । उल्टै काश्मीर कन्स्पिरेसी केस अर्थात् राष्ट्रविरुद्धको अपराध नाम दिएर घर र जेलमा बन्दी बनाइयो । झन्डै एक दशक बढी उनी हाउस एरेस्टमा रहेर ८ अप्रिल १९६४ मा जेलमुक्त भए । यद्यपि, १९५३ देखि १९६३ सम्म संघीय सरकारकै मातहत र जालझेलमा बित्यो र सन् १९६३ को एक पक्षीय निर्वाचनमार्फत स्थापित गरिएको एसेम्बली गभर्नर प्रणाली स्थापित गरियो । त्यस प्रणालीले अर्को १० वर्ष धान्यो ।
तेस्रो, सन् १९७१ मा भारत–पाकिस्तान युद्ध पछि (बंगलादेश अस्तित्वमा आएपछि) प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भारतीय सरकारले काश्मीरमाथि अझ बढी दबाब सिर्जना ग¥यो । भारत अकुपाइड काश्मीरको अधिक बिलयका लागि प्रयत्नशील थियो । त्यो प्रयत्नअनुरूप शेख अब्दुल्लाह र इन्दिरा गान्धीबीच सम्झौता भयो । यद्यपि, यो सम्झौता भारतीय संविधानको धारा ३७०, ३५ (ए) बमोजिम नै गरिएको थियो । शेख अब्दुल्लाह त्यसपछि सन् १९७५ मा काश्मीर राज्यका चिफ मिनिस्टर बने र नमरुन्जेल अर्थात् सन् १९८२ सम्म त्यो कुर्सीमै रहे ।
‘युद्ध’, ‘तिकडमबाजी’ र ‘षड्यन्त्रले’ राज्य कमजोर बन्दै जानु अस्वाभाविक थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको माग जनमानसमा अधिकारका रूपमा स्थापित हुनु पनि अनौठो थिएन । सीमामा पाकिस्तान र चीन थियो । अफगानिस्तानमा सोभियत हस्तक्षेपपछि सोभियत अलायन्ससँग जोडिएको भारतमा र भारतको सबैभन्दा सेन्सेटिभ मानिएको काश्मीरमा अर्को पक्षले नखेल्ने भन्ने हुन्थेन ।
बेरोजगारी र भोकमरीमै असन्तुष्टि जन्मन्छ र अझ राष्ट्रियता थपिए आगो बल्न बेर लाग्दैन । काश्मीरमा बिस्तारै भुसको आगो सल्कियो । कन्स्पिरेसी अब प्रदेश र केन्द्रको राजधानीमा मात्र रहेन, गाउँमा विद्रोहको रूपमा बिस्तारै प्रवेश ग¥यो ।
मोदी शासन–२ र काश्मीर
सन् १९९० को दशक सुरु भएपछि संसार धेरै बदलियो । सोभियत संघको पतन पछि नवउदारवादी अर्थ राजनीतिले सामरिकभन्दा बढी व्यापारिक र नाफा आर्जन गर्ने संस्कार र पद्धति विकसित हुँदै गयो । सन् १९९३ मा अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति निर्वाचित भए । क्लिन्टनले आफ्नो सुरुवाती कार्यकालमा स्टेट डिपार्टमेन्टभित्र साउथ एसिया डिभिजन खोले र रविन राफेललाई जिम्मा लगाए । उनले बिस्तारै बिस्तारै भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरे ।
तर, क्लिन्टन २–० मा आइपुग्दा उनको प्रभाव स्टेट डिपार्टमेन्टमा कमजोर भयो । यो अवधि अर्थात् नब्बेकै दशकको दोस्रो कालखण्डमा पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरबाट क्रस–बोर्डर हस्तक्षेप गर्दै भारतीय काश्मीर उपत्यका साइडमा बढ्न थाल्यो । आजभन्दा २० वर्षअघि सन् १९९९ मा कार्गिल युद्ध भयो । पछि बिल क्लिन्टनकै मध्यस्थतामा पाकिस्तान नै लाइन अफ कन्ट्रोलबाट पछि हट्यो । तैपनि, जैश–ए–मोहम्मदले भारतीय लोकसभामा आक्रमण गर्‍यो ।
सन् २००१ मा ९÷११ घटनापछि आतंकवादी घटना अलि मत्थर भयो । सन् २००० मा अटल बिहारी बाजपेयी नेतृत्वको बिजेपी सरकार केन्द्रमा रहेको समयमा नेसनल कन्फरेन्सका फारुक अब्दुल्लाह (शेख अब्दुल्लाहका छोरा)को सरकारले स्टेट एसेम्ब्लीमार्फत सन् १९५३ कै स्टाटसमा स्वशासन(अटोनोमी) पाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । वास्तवमा काश्मीरमा आइरहेको बदलाव र क्रस बोर्डर दबाब झेल्न यो रेजुलेसन पास गर्न आवश्यक थियो तर बिजेपी सरकारले मान्ने कुरै थिएन ।
सन् २००४ पछि स्थापित हुन पुगेको मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस सरकार राजनीतिक रूपमा टालटुले र आर्थिक रूपमा नवउदारवादी अर्थ राजनीतिमा रहँदै अगाडि बढ्यो । मनमोहन–२ मा त ऊ पूर्ण रूपमा नवउदारवादको यथास्थितिमा रमाइरह्यो । काश्मीर, उत्तर–पूर्वलगायत समग्र मुलुकको रोजगारी वृद्धिमा देखिएको अवरुद्ध अर्थ राजनीतिक पहिचान गर्न सर्वथा असफल भयो । सन् २०१४ मा आइपुग्दा बेरोजगारी र असमानता धेरै विस्फोटक अवस्थामा पुगिसेकेको थियो ।
पहाडी, द्वन्द्वग्रस्त र पराजित मानसिकता बोकेको काश्मीरमा त्यसको प्रभाव देखिनु अनौठो थिएन । पढे–लेखेका तरुण युवायुवती काश्मीर स्वतन्त्रताका लागि झन् उद्वेलित भएर लागिपरेको विभिन्न घटनाले सिद्ध गरेका छन् । ब्रुहान वानी तथा जाकिर मुसाजस्ता स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका युवा मारिएको घटनाले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
तर, यसै वर्षको फेब्रुअरीमा जैश–ए– मोहम्मदले पुलवामामा गस्तीमा हिँडिरहेको भारतीय सेनामाथि आक्रमण गरे र उक्त सुसाइड घटनामा दर्जनाैं सुरक्षाकर्मी मारिए । बदलामा मोदीले रातारात सर्जिकल अपरेसन नाम दिएर पाकिस्तान बोर्डरमा आक्रमण गरे ।
भारतभरका कर्पोरेट मिडिया अर्को शब्दमा अडियो तथा भिजुअल तथा अखबारमाथि बलियो पकड बनाएका बिजेपी सरकारका प्रधानमन्त्री आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता पछि घोर असफलताका बाबजुद त्यो ‘सर्जिकल अपरेसन’ पछि रातारात हिरो बनाइए । महान् राष्ट्रवादी हुन पुगे । हत्या र हिंसाभन्दा आर्थिक उन्नति र प्रगतिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर दलिल गर्ने पार्टीहरू रातारात दलाल अराष्ट्रिय करार गरिए । र, जनताका नजरमा गद्दार । ५ सय ४३ सिट भएको लोकसभामा बिजेपीले ३०३ सिट हाासिल गर्नुको पछाडि यही ‘राष्ट्रवाद’ सबैभन्दा मुख्य कारण साबित भयो ।
भारतीय काश्मीरमा सुरुमा दुई थरी सोच हावी थियो । पहिलो धर्मनिरपेक्षता र प्रजातन्त्र (सेकुलारिजम एन्ड डेमोक्रेसी) कि धार्मिक तन्त्र (थियोक्रेसी) । पहिलो सोच हावी भयो । दोस्रोपटक घिनलाग्दो सत्ता राजनीतिको खेल सुरु भयो । जसले डेमोक्रेसी र सेकुलारिजमलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो । विकास र व्यवस्थापनमा सहभागिता कमजोर बन्दै गयो । असमानता र भष्ट्राचार मौलाउने अवसरको अवस्था सिर्जना भयो ।
बेरोजगारी, महँगी र अन्य अनाचारले प्रश्रय पाउँदै गएपछि आमअसन्तुष्टि र विद्रोहका लागि पलायन हुन नौलो थिएन । यी यावत् घटनापछि अर्थात् तेस्रो अवधिमा हिन्दु अतिवाद बनाम इस्लामिक गणतन्त्र आमनेसामने भएका छन् ।
भारतीय काश्मीरमा केहीअघिसम्म चार खालका सोच थिए । पहिलो भारतीय राज्यभित्रै धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातन्त्रको गुन्जायस देख्ने संसदवादी पार्टीहरू नेसनल कन्फ्रेरेनस, पिपुल्स डेमोक्र्याटिक पार्टी (पीडीपी), भारतीय कांग्रेस तथा भाकपा (माक्र्सवादी), दोस्रो निर्वाचनमा भाग नलिएका तर हिंसा र आतंकमा नहोमिएका पार्टीहरू र तेस्रो बिजेपीलगायत अति दक्षिणपन्थी पार्टीहरू जो विगतमै काश्मीरलाई साँचो अर्थमा पूर्ण रुपमा गाभेर उपनिवेश बनाउन चाहन्थे । र, चौथो अति उग्रपन्थी धार्मिक मुस्लिम अतिवादीहरू जो जनमत संग्रह नमान्ने हुँदा सशस्त्र युद्धका माध्यमबाट जितेर मुस्लिम राष्ट्र घोषणा गर्ने समूह जो मुख्यतः पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरमा बसेर छद्म युद्ध गरिरहेका छन् ।
पुलवामालगायतका घटना घटाएर मुस्लिम अतिवादी दक्षिणपन्थी शक्ति भारतीय जनतापार्टीलाई पुनः सत्तामा ल्याउन चाहन्थे । बिजेपीलगायत दक्षिणपन्थीहरू पनि अन्य वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई हटाएर अतिवादीलाई माथ गर्दै आफ्नो अति हिन्दुत्ववाद लागू गर्न चाहन्थे भन्ने देखिन्थ्यो ।
सन् २०१९ को निर्वाचनपछि मोदी–२ शासनकालमा यही सब हुने सम्भावना टड्कारो रूपमा देखिए किनकि मोदी–२ सरकारसँग आमजनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै ठोस नयाँ योजना थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुनेछैन । खास घरानियाँ खर्बपति कर्पोरेट हाउस, खास कर्पोरेट मिडिया र अन्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा वशीभूत पारेर राज्यदोहनमा लागेको मोदी सरकारसँग लोकप्रियता कायम गर्न अर्को सोच पनि देखिँदैनथ्यो ।
सरसरती हेर्दा काश्मीर दक्षिणपन्थी बिजेपी बनाम जनसंघीहरूका लागि सत्ता उक्लने भ¥याङ बन्यो । धारा ३७०, ३५ (ए) खारेजी पछि संसदीय राजनीति गर्ने दलहरूको अस्तित्व दाउमा प¥यो । उनीहरूको मध्यमार्गी एजेन्डालाई मोदी सरकारको वर्तमान कदमले भुइँमा न भाँडामा जस्तो बनाइदिएको छ । अब संसदवाद, विचार, छलफल र बहुपक्षीय संवादको गुन्जायस देखिन्न । भारतीय संघीय गृहमन्त्रीले राज्यसभामा संकल्प प्रस्ताव तथा विधेयक प्रस्तुत गर्दा अन्य पार्टीहरूमाथि प्रस्तुत गरेको भाषणले पनि अब संसदीय प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासका लागि उभिने ठाउँ रहेको देखिन्न ।
मोदी–२ को उत्थान भारतीय समाजको सांस्कृतिक तथा सामाजिक विभाजनमा टेकेर भएको थियो । यो विजय विगतको इतिहास केलाउने, सामाजिक परिवेश र उत्थानबारे विचार गर्ने भन्दा पनि हिन्दुत्वको विजय र अरूको पराजयका रूपमा विजय हासिल गर्नेहरूले बुझेका थिए । दुई तिहाइ मतसहित एनडीए गठबन्धन (बिजेपी र सहयोगी दलहरूले हासिल गरे पछि) सबैभन्दा पहिले भारतीय धर्मनिरपेक्षतालाई धराशायी बनाउन चाहन्थ्यो ।
दोस्रो, कथित बहुमतको नाममा लोकतान्त्रिक परिपाटी समाप्त पारेर प्रजातन्त्रका नाममा हिन्दु अधिनायकवाद लागू गर्नु थियो । मोदी–२ को उदयपछि दुःखद नै सही । यी सबै देख्न पाइन्छ भन्ने धेरैले अनुमान गरिसकेका थिए ।
भारतीय संविधानको धारा ३७०, ३५ (ए) को बन्दोबस्तीले मुस्लिम बाहुल्य भएको आजाद काश्मीरलाई भारतमा मिल्न आकर्षण पैदा गरेको थियो । जाति वा धर्म (थियोक्रेसी)लाई लत्याएको थियो । प्रजातन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई रोजेका थिए काश्मीरीहरूले । उनीहरूको भारतको केन्द्र सरकारसँग एउटै सर्त थियो, ‘काश्मीरीयात’ को अस्मितामाथि अहस्तक्षेप ।
संघीय राज्य व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुन्छन् । स्थानीयता सर्वोपरि हुने गर्छ । जनमत सर्वोपरि हुने गर्छ । कुनै पनि खालको जनमतको बाटो नसमातीकन काश्मीर विभाजन कोरिएको छ र धारा ३७० खारेज गरेर केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ । काश्मीरमाथि एक प्रकारले भारतीय संसदबाट औपनिवेशिक शासन विधिवत रूपमा सुरु गरिएको छ । सभा करोड जनसंख्या रहेको भारत अकुपाइड काश्मीरीहरूले कसरी ग्रहण गर्ने ? त्यो त भविष्यले देखाउला । तर, काश्मीरको लोकतान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्षताको हत्या भएको छ । हिन्दु र मुस्लिम अतिवादीहरू आमनेसामने भएका छन् ।
हिटलरको नाजीपथमा नरेन्द्र मोदी
पानी, जमिन, धर्म : के हो काश्मीर समस्या ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २२, २०७६, ११:४८:००
आजको बजार हेरेर ऋणपत्रको व्याज तोक्नुभयो, भोलिको दिनमा यसले सहयोग गर्छ ?
अराजक दल, गैरजिम्मेवार नेतृत्व
जबजले कम्युनिस्टलाई दलाल बनायो
रोजगारी, समाजवादी यात्रा र बजेट
प्रधानमन्त्री ओलीको अक्सफोर्ड कूटनीति
बेल्ट–रोड–इनिसिएटिभ र नेपाल
नेपाली सन्दर्भ र ‘समाजवाद’
सुदूरपश्चिम महोत्सव सुरु, पूर्वमन्त्री रावललाई सातबुँदे माग पेश
आज दिनभर : गाैरिकाकाे चमत्कार, हरायाे गैँडा, प्रदेश खाेज्न कता ?
कुस्तीः भारतले ४ स्वर्ण जित्दा नेपाल २ रजतमा सीमित
सचिवालयका कर्मचारीकाे २० महिनाको तलब सभामुखको खातामा
अयोध्या लागे जनकपुरका जन्ती